Obere ụlọ na-abụkarị ụdị ejiji ọhụụ na nke ọhụụ nke esp maka mgbazinye obere ụlọ a. N'agbanyeghị obere oghere, warara paseeji, na obere ụlọ, a ka nwere ụzọ ole na ole iji mee ka ọ dịkwuo mma, ibu, ma mara mma karị. N'ihi oke sara mbara, anyị ga-agwakọta arịa ụlọ nke ọma na ime imewe, na…
Kedu ihe ndina anyị na-azụkarị maka ime ụlọ? Azịza ya bụ akwa, akpụkpọ anụ, ma ọ bụ ndị ọzọ ọ bụla, nke bụ oke nhọrọ maka ọtụtụ ezinụlọ. Ma, ị nụrụ na inflatable sofas? Ee, Ọ dị ka obere ihe dị egwu na amaghị maka ọtụtụ mmadụ. Sofa inflatable nwere PVC, na pressurize igba gas n'ime ahụ.
Enwere ụdị sofa dị iche iche nke na ọ na-esiri ike ịhọrọ ma ị ga-abanye n'ụlọ ọhụrụ ma ọ bụ dochie nke okenye. Mana ekwenyere m na ọ bụ otu n'ime ihe kachasị atọ ụtọ ịhọrọ ọtụtụ puku iberibe. Ọ bụ ya mere m ji kpebie ide edemede a. Otu ihe m hụrụ n'anya bụ ịgagharị na arịa ụlọ…
Isi ihe eji achọ mma na họtel ahụ bụ mkpụrụ obi nke ụlọ nkwari akụ niile. Ọdịdị dị mma nke ịchọ mma dị nro nwere ike ịrụ ọrụ n'ime ka mmetụta ahụ ruo na oke ụfọdụ. Otlọ oriri na ọ manufacturerụ soụ sofa ndị na-emepụta Baotian Furniture na-agwa gị gbasara imewe mma ụlọ oriri na ọ hotelụ, Dakọtara na adụ ngwá ụlọ. Nke mbụ bụ nhọrọ nke ụlọ nkwari akụ…
Anyị ga-anọ na nkwari akụ n'èzí. Ọ dị anyị ka sofa ahụ dị iche na sofa dị n'ụlọ anyị? Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụta sofa ụlọ nkwari akụ, kedu ka ị ga-esi họrọ ya? Fọdụ ndị na-eme ihe nkiri ajụla ajụjụ ndị dị otú ahụ. Solọ oriri na ọ productsụ soụ sofas bụ ngwaahịa ndị na-adịghị mma. Maka sofas omenala, ọ bụghị dị ka adaba dị ka ot ogbe mmepụta…
N'otu oge ahụ, ọnọdụ obibi ndụ mba agbanweela nke ọma, ọ na-etinyekwa ihe ndị dị elu dị elu karịa na ogo na ọrụ ụlọ nkwari akụ. Ya mere, mgbe ị na-ahọrọ oche ụlọ nkwari akụ, nnukwu ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ na-eleba anya n'ihe bara uru, mma, nkasi obi, nkọwa na akụkụ ndị ọzọ, ma tinye ihe dị elu maka ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka ụlọ nkwari akụ. Na ya aesthetics na elu-ọgwụgwụ ngwá ụlọ ngwaahịa,…
Kedu ihe bụ ezigbo ụra ụra?
Sleepkpụrụ ihi ụra dị mma na-eme ka echi jupụta ike esp maka ndị okenye na-arụ ọrụ na ụmụ akwụkwọ ibu dị arọ. Idebe ụra bụ ọrụ anyị na-eme nke na-enyere anyị aka ihi ụra ma jigide ezigbo ụra. Sleepra ụra na-adịghị mma nwere ike igbochi ịdị mma nke ụra. N'ihi ya, e weere na ọtụtụ ndị anaghị enwe ezigbo ụra, anyị nwere olileanya na obere obere ndụmọdụ bara uru tupu ị lakpuo ụra.